Kungakanani buyisidakamizwa "Tsiklomed"? Intengo yale thuluzi esekugcineni kwalesi sihloko. Futhi, inikeza ulwazi sokobana mhlawumbe kuneengcenye analogs kule izidakamizwa, uma ingasetshenziswa ekwelapheni izingane, lokho izakhiwo it has, okubandakanya e isibalo samalungu alo, nokunye. D.
Ukwakheka, umumo, futhi emaphaketheni incazelo izidakamizwa
Ngayiphi ifomu senziwa imithi "Tsiklomed"? Yokusetshenziswa ibika ukuthi izidakamizwa esebenzayo is imakethwa ngesimo iso amaconsi. Isithako asebenzayo lokhu ejenti kuyinto hydrochloride cyclopentolate. Futhi, umkhiqizo iqukethe izithako engeziwe ngesimo edetate disodium, amanzi, i-sodium chloride futhi benzalkonium chloride.
Eye lehla "Tsiklomed" analogs echazwe ngezansi nje, kukhona isixazululo kungekho nto enemibala emihle futhi esobala. It angakuthola weThrojani umfuma 5 ml aqukethwe iphakheji amakhadibhodi.
I izakhiwo kwemithi kwezimali zendawo
Yini property umuthi wendawo "Tsiklomed"? Yokusetshenziswa ibika ukuthi imiphumela esemqoka yalolu ejenti kukhona holinolitichesky futhi mydriatic.
nomuthi Active uyakwazi ivimbela receptor M-cholinergic, okuholela ukwanda ukuphumula Umfundi we imisipha iso.
Umfundi Ukwandisa waphawula cishe 18-22 imizuzu emva instillation yokulungiselela futhi zigcinwe amahora 8-11 (ngezinye izikhathi eside). By the way, imiphumela asalile kungenzeka in iziguli ngisho emva kwezinsuku.
Kanjani lesi sidakamizwa "Tsiklomed"? Imiyalelo kwi uthi isicelo ukuthi izidakamizwa kungaba nomphumela okuncane antispasmodic. Kunciphisa tonus we emsipheni vagus futhi uyanda (kancane) ingcindezi intraocular, futhi kuholela ekwandeni e kwenhliziyo.
Against ngemuva ukusetshenziswa kwaleli thuluzi is eziwohlokayo umsebenzi secretory we salivary, esiswini, pancreatic nezindlala bronchial. Umuthi lingena kusivimbeli gazi ebuchosheni. I imithamo evamile it is inkanuko nomthelela ubuchopho ngokufaka isebenze isikhungo zokuphefumula.
Lo muthi ukucindezelwa kwakuvame ukusetshenziswa njengezaba izidakamizwa, umuthi wamehlo simbe ekhaleni.
I pharmacokinetics ejenti nezokusigcoba
Kungaba ugxile izidakamizwa wendawo "Tsiklomed" (iso amaconsi)? Izibuyekezo ochwepheshe ukubika ukuthi lesi isidakamizwa kahle bumuncwa conjunctiva. Ubuningi eliphakeme we ketshezi eyisisekelo CNS izidakamizwa waphawula emva kwemizuzu 40-60.
It is sesibopho ukuthobisa plasma amaprotheni kule nokulungiselela ngokulinganisela, futhi isigamu-nokuphila imizuzu 110.
Eye lehla "Tsiklomed" kabani intengo impela high, ingasetshenziswa kulezi zimo ezilandelayo:
ngoba izindlela zokuxilonga ekutholweni kwalungiswa izinkunga zokubona, futhi ophthalmoscopy;
e ekwelapheni izifo esweni anterior ukuthi kukhona ukuvuvukala ngokwemvelo (kuba, isibonelo, sclerites, episcleritis, iridocyclitis, keratitis, futhi uveitis);
e nokuhlinza amehlo (lokulungiselela ukuhlinzwa ukuze andise umfundi ngesikhathi cataract).
Izidakamizwa "Tsiklomed" izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu yokusetshenziswa akuvunyelwe. Futhi, akulona engabelwe kona:
ukufiphala kanye esolwa khona yayo;
hypersensitivity kuya cyclopentolate nesineke kanye nezinye izindlela izingxenye
paresis posttraumatic iris.
Ngokunakekela okukhulu imithi Kunconywa abantu wendlala Hyperplasia futhi isimiso emathunjini, kanye nasebekhulile.
Izidakamizwa "Tsiklomed": yokusetshenziswa
Ngokusho imiyalelo, kubhekwe amathonsi iso kumele kusetshenziswe ihlelwe ngokulandelana kwezihloko kuphela. Badinga ukumba ngemuva ijwabu leso 1-2 amathonsi ngosuku.
Ukuze afeze izindlela zokuxilonga ukuthola izilonda le fundus ukusetshenziswa 3 amathonsi ngelanga nge break imizuzu 10.
Ngo inqubo kwalungiswa izinkunga zokubona olwenziwa izingane zisebenza 2 amathonsi zomuthi nge ukuchayeka imizuzu engu-15 (cishe kathathu ngosuku) ka.
Ngo Izifo ukuvuvukala esweni ngokuvamile iqondiswa iconsi kathathu ngosuku kusho.
Ochwepheshe bezifo, umuthi ayivamile ukubangela engemihle. ukusabela Ngokuvamile libonakaliswa ehlweni: ukwehla acuity ezibukwayo (lezivakashi), hyperemia conjunctival, emizweni ezingemnandi ngemuva kokusebenzisa amathonsi, waqinisa intraocular, ikakhulukazi in iziguli glaucoma eyinhloko.
Ngokuphathelene jikelele ukusabela ezingezinhle, abasolwa ibandakanya ukucanuzela kwenhliziyo, ubuthakathaka, isiyezi kanye tachycardia.
Izimpawu ukweqisa izidakamizwa
Sebenzisa ngeso lehla "Tsiklomed" udokotela kuphela kufanele Kunconywa imithamo. Lokhu kungenxa yokuthi nenani elikhulu izidakamizwa kungabangela izimpawu engadingeki ezifana tachycardia, kome isikhumba nolwelwesi lwamafinyila, ukusabela zengqondo (disorientation, ukukhathala, izinguquko isimo ngokomzwelo, inkulumo incoherent), kanye ikhoma nokubopha zokuphefumula.
Njengoba ekwelapheni izimo ezinjalo usebenzisa imijovo emthanjeni of physostigmine (izingane - 500 mg, futhi umuntu omdala - 2 mg).
Umthelela kungavundisa yokubika kusho sympathomimetics (isb, "Mezaton") futhi kwehlise - m-cholinomimetics (isb, "pilocarpine").
Inhlanganisela "Tsiklomeda" nge izidakamizwa ezithinta anticholinergic m-izakhiwo kungase kwandise imiphumela engemihle ngowokuqala.
Isenzo "Tsiklomeda" ngempumelelo kakhulu iziguli nge isiyingi esimnyama seso esikhunjeni. Ezinjalo abantu besebenzisa izidakamizwa yokuhlala asalile bengase bazikhandlele 2.0-4.0 D.
Esikhathini inqubo yokusebenzisa eyedrops kwasebekhulile kudinga ukuzithiba ngokucophelela ingcindezi intraocular.
Bekhulelwe nangenkathi bencelisa
Kuze kube manje, i-data esekhadini ukuphepha iso "Tsiklomed" lehla abesifazane abakhulelwe ngomama ngesikhathi ibele, akwanele. Kule ndaba, zisebenzisa izidakamizwa umbuzo kungaba ezimweni lapho inzuzo kulindeleke athole ukwelashwa ngenxa isiguli kunalelo ingozi kwezinso ku-fetus noma usana.
Imigomo nemibandela isitoreji
Ngokusho imiyalelo, ngeso lehla "Tsiklomed" kufanele agcinwe kude nezingane futhi bavikelekile ukukhanya ezingeni lokushisa esingeqile degrees 25 (hhayi kwi freezer). Impilo eshalofini lokhu mkhiqizo engu-2. Nokho, ngemva kuvulwa ibhodlela weThrojani, le nkathi kuyehla kube inyanga eyodwa.
Eye lehla "Tsiklomed": nozakwabo kanye nezindleko
Intengo yaleli izidakamizwa impela high. Thenga ke ekhemisi kungabangwa ruble 380-400. Kepha kumakhophi, izindleko zabo kungaba kokubili ngaphansi nangaphezulu.
Amathuluzi abalandelayo kude ethandwa kakhulu futhi ngempumelelo izidakamizwa esikhundleni kubhekwe "Midriatsil", "Appamin Plus", "Tropikamid", "Atropine" "Irifrin".
"Tsiklomed" kungenziwa esikhundleni ngeminye imithi kuphela emva kokubonisana kudokotela wezifo zamehlo.
Uphenyo iso amaconsi
Ngokuvamile, le ukubuyekezwa kwe lokhu ukulungiselela ishiywa kulezo ziguli ayisebenzisile afeze izinyathelo zokuxilonga ngaphambi cwaningo. Ngokusho kwemibiko yabo, umuthi cishe zamenza imiphumela okungafunwa futhi kwamukeleka aphila kahle. Nokho, kukhona labo Izibuyekezo ukuthi ukusho ngemvelaphi iso ububomvu Futhi ukushiswa isasasa. Kulokhu, kutuswa ukuba ujike kuchwepheshe.
iziguli eziningi kakhulu abanesifiso sokwazi maqondana nalokho okwakuzokwenzeka uma ukuvuza izidakamizwa e-sinuses acinene. Ukusebenzisa amathonsi ngaleyo ndlela kungaholela nemiphumela ezingalindelekile (kusuka ukusangana, kanye lability ngokomzwelo ukuba umonakalo esinzima zempilo yengqondo). Ngakho-ke, kusukela ukusetshenziswa okunjalo imithi kungcono ukuba nidede.
Tablets kusukela inzululwane. Tablets kusukela isiyezi asebekhulile
"Amakhandlela Ultraproct" - usizo ezisheshayo hemorrhoids
Potassium thiocyanate - ikhemikhali enobuthi elisetshenziswa ithempulethi yengqikithi
Kuyini nymphomania? Nymphomania - indlela ukulwa?
Nasi ezithakazelisayo:-ke zonke lezi zilo sifanekisela butterfly kwengqondo namasiko ahlukene futhi Feng Shui
Vakhtangov Theatre. Isikimu egumbini nomlando wayo
Plasma ukusika umshini, CNC. Imishini kanye nempahla
Vitaly Melnikov - Umbhali kanye nomqondisi, owawina lo "Nika" Award ngeqhaza lakhe ekuthuthukiseni cinema
Car umbala Moray - obugagu esidlule
Uwoyela Fish "Amber uphonsa". Incazelo kanye nokusebenzisa izidakamizwa
Guarana - ingabe isitshalo?